पदक विजेता धनकुटाका खेलाडि अभिनन्दित – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७६, १८ पुष शुक्रबार ११:४७
धनकुटा । हालै सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताका पदक धनकुटेली खेलाडिहरुलाई एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी अभिनन्दित गरिएको छ । अभिनन्दित हुने खेलाडिहरुमा नेपाली फुटबल टिमका कप्तान सुजल श्रेष्ठ र उसु खेलाडी चित्रसिंह ठकुरी छन् । श्रेष्ठ फुटवलमा स्वर्ण पदक विजेता कप्तान हुन् भने ठकुरी उसुका काश्य पदक विजेता हुन् ।
सो अवसरमा कप्तान श्रेष्ठलाई नगद एक लाख र सम्मान पत्र तथा उसु खेलाडी ठकुरीलाई नगद ५० हजार रुपैयाँ र सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको थियो । सोहि कार्यक्रममा सागमा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका भन्दै निर्णायक खेमराज थापालाई समेत सम्मानपत्रले सम्मान गरिएको छ । सागमा निर्णायकको भूमिका धनकुटाबाट पाँच जनाले निर्वाह गरेका थिए । यसरी निर्णायक हुनेहरुमा थापासँगै विनय राई, नयन श्रेष्ठ, किरण प्रधान र टिकाराम श्रेष्ठ रहेको थिए ।
सो अवससरमा अभिनन्दित कप्तान श्रेष्ठले स्वर्ण पदक जितेपछि धेरै ठाउँमा सम्मान पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो गृहनगरमा पाएको जस्तो सम्मानले खुसी अन्य स्थानमा नदिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यहि टुडिखेलमा फुटवल अध्यास गरेको स्मरण गर्दै आफूलाई धनकुटेली फुटवलप्रेमीहरुको साथ र सहयोगबाट अहिले यो स्थानमा पुगेको बताए । यस्तै अर्का सम्मानित उसुका खेलाडि ठकुरीले धनकुटाले दिएको सम्मानले आगामी दिनमा अझ अघि बढ्न प्रेरणा दिएको बताए ।
कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङले खेलाडीले देशको शिर विश्वसामु उचो राख्ने बताए । उनले धनकुटामा अन्य खेलाडीहरु पनि सुजल र ठकुरी जस्तो उप्पादन गर्न नगरपालिका सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । उनले श्रेष्ठ र ठकुरीले सागमा देश र धनकुटाको गौरव भन्दै आगामी दिनमा थप हौसला मिलोस् भनेर सम्मान गरिएको बताए ।
सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्णबहादुर घिमिरे,
धनकुटा बसपार्कबाट सुरु भएको अभिनन्दन ¥यालीले श्रेष्ठ र ठकुरीलाई बजार परिक्रमा गराएको निेकपाका नगर अध्यक्ष अर्जुन छारा, नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति रोसन श्रेष्ठले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । अधिकृत सिताराम गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले गरेकि थिईन् । नगर प्रमुख तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मान कार्यक्रममा राजनीतिक दल, सम्मानित खेलाडिका मातापिता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, खेलप्रमी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बसपार्कमा भेला भई शुरु गरिएको ¥याली टुडिखेलमा पुगि सभामा परिणत भएको थियो । सो ¥यालीमा विभिन्न जनजातिहरुको मौलिक संस्कृथित झल्कने झाँकीहरु प्रदर्शन गरिएको थियो । बाट सञ्चालन श्रेष्ठ र ठकुरीलाई अभिनन्दन गर्दा विभिन्न जातीय समुदाय झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । ¥यालीमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका, सरकारी थतथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि तथा सयौंको संख्यामा स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।
सो प्रतियोगितामा नेपालले २५ विधाका खेलमा ५१ स्वर्ण ६० रजत र ९५ कास्य जितेको थियो । जुन हालसम्म सम्पन्न यो प्रतियोगिताको ठूलो उपलब्धी हो ।
विस २०४९ साल माघ २२ गते हुलाकटोलमा आमा रोमा श्रेष्ठ र बुबा राजु श्रेष्ठको कोखबाट जन्मिएका थिए, सुजल । उनले ८ कक्षासम्मको अध्ययन स्थानीय बालसंसार आवासीय माविबाट गरेका थिए । १३ वर्षको उमेरबाट स्थानीय क्लवबाट फुटबल खेल्न सुरु गरेका सुजलले काठमाण्डौको जेभियर स्कूलबाट १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका थिए । उनी धनकुटाबाट अण्डर १६ र १९ को राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता खेलेका थिए । त्यसपछि ए डिभिजन क्लव मनाङ मस्र्याङ्दी क्लवमा सहकप्तान र कप्तान हुँदै अहिले नेपाली राष्ट्रिय टीममा पर्नमात्र हैन कप्तान नै हुन् सफल भए । हाल उनी मच्छिन्द्र क्लव काठमाडौबाट खेल्दै आएका छन् । सुजलले नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिप, बंगबन्धु कप, एएफसी सोलाडिरिटी र १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नेपाललाई पदक दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनलाई एएफसी सोलाडिरिटी कपको उपाधि नेपालले जितेको बेला पनि धनकुटामा किरण चेम्जोङसँगै नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो ।
को हुन् चित्रसिंह ?
धनकुटा १ मा बुबा यज्ञसिंह ठकुरी र आमा ओमकुमारी ठकुरीका कोखबाट जन्मिएका चित्रसिंह ठकुरीले २०५७ सालबाट उसुको प्रशिक्षक नयन श्रेष्ठले ल्याएर प्रशिक्षण लिन थालेका थिए । स्थानीय जनता आधारभूत विद्यालय र भाषा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका ठकुरीले उसुमा विभिन्न क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पदक जितिसकेका छन् । उनी २०६९ सालबाट नेपाल आर्मी क्लवबाट उसु प्रतियोगितामा भाग लिँदै आएका छन् ।
धनकुटा नगरपालिकाले यस अघि आठौं दक्षिण एशियाली खेलका स्वर्ण पदक विजेता कुशल श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । यस्तै रजत पदक विजेता दुर्गा निरौलालाई पनि सम्मान गरिएके थियो ।
रौतहटलाई पराजित गर्दै आर्मी फाईनलमा